Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Icandelo lezokhenketho liphawula umnyhadala wesine wonyaka
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ukonwatyiswa • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-Seychelles ibhiyozela uSuku loKhenketho lweHlabathi
USuku lweHlabathi lezoKhenketho kulo nyaka luza kubhiyozelwa ekuhlaleni phantsi komxholo othi “Ukubumba ikamva lethu” uNobhala oyiNtloko wezoKhenketho, uNkosazana Sherin Francis, wabhengeza kwindibano noonondaba ebibanjwe ngoMvulo, umhla we-20 kweyoMsintsi, 2021, eBotanical House. Lo mnyhadala uthatha iveki yonke uzakubanjwa ukusukela nge-27 kaSeptemba, 2021, ukuya nge-2 ka-Okthobha ka-2021. Umxholo othi "Ukubumba ikamva lethu" ukhethwe ukuba ungagcini nje ngokuqhwabela izandla abo basebenza kolu shishino kodwa nabantu baseSeychelles kunye indawo ekuyiwa kuyo.
Umxholo wakhethwa ukuba liqhwabele izandla igalelo labo basebenza kolu shishino kunye nabantu baseSeychelles kunye nendawo ekuyiwa kuyo.
UMnyhadala wezoKhenketho uza kubandakanya intetho yoMphathiswa wezoKhenketho, etyhila abantu abahlonitshwayo “njengooVulindlela boKhenketho.”
Abantwana nabo baya kuthatha inxaxheba njengoko bebeqhuba udliwanondlebe nabantu bezokhenketho.
Umxholo othi "UkuXoxa ikamva lethu" ukhethwe ukuba ungaliqhwabeli izandla igalelo labo basebenza kolu shishino kuphela kodwa kwanabantu Seytshels nendawo ekuyiwa kuyo njengoko iSebe lezoKhenketho lihambela ukubandakanya uluntu nezithili kushishino lwezokhenketho. USuku lwezoKhenketho lweHlabathi lweZizwe eziManyeneyo (i-UNWTO) uSuku lwezoKhenketho lweHlabathi 'lubanjelwe kwihlabathi lonke phantsi komxholo othi "uKhenketho loHlumo oluBandakanyayo."
"UMnyhadala wezoKhenketho lelona xesha likhethekileyo kuthi njengoko sithatha ixesha lokungabhiyozeli nje kuphela urhwebo kunye nendawo esiya kuyo kodwa sikwabonisa imeko yeshishini lethu," utshilo u-PS Francis xa ebesenza ikhalenda yemisitho yokuphawula ukhenketho lonyaka iveki.
Oku kuya kubandakanya intetho yoMphathiswa Wezokhenketho uSylvestre Radegonde kwiNdlu yoWiso-mthetho, ukutyhilwa kwabantu abahlonitshwayo njengaba "Oovulindlela boKhenketho," uthotho lokubonakala kunye neengxoxo kwiinkqubo eziphambili kunomathotholo, kumabonwakude nakumaqonga onxibelelwano. amanani oshishino aphambili nokusungulwa kokhuphiswano lokufota phakathi kwezinye izinto. Abantwana nabo bazakuthatha inxaxheba njengokuba bebeqhuba udliwanondlebe nabantu bezokhenketho kwisitishi seYouTube sesebe lezokhenketho.
Omtsha kulo nyaka ngumsebenzi wempembelelo ngohlobo lomsitho wokutyala umthi, nozakubanjwa nge-2 kaOkthobha ka-2021. U-PS Francis uxele ukuba lo msitho uqinisa ukuzibophelela kwendawo ekuzinzeni kuyo kunye neenzame zayo zokuhlala luhlaza. Amalungu iiSeychelles Uluntu luyamenywa ukuba luxhase lo msebenzi kude kwimibutho nakubumelwane ngokutyala umthi.
UPS Francis uvakalise ukuzisola kwakhe ngenxa yeemeko eziqhubekayo nobhubhane, uluntu aluzokwazi ukuthatha inxaxheba buqu kwimicimbi, kwaye iminyhadala iyakubakho ngokumenywa kuphela kwabathathi-nxaxheba okanye ukubanjwa kwi-Intanethi.
“Siyinciphisile imisebenzi yethu ngokubhekisele kumanyathelo ezempilo oluntu akhoyo. Ngaphandle kwezithintelo, sonelisekile ukuba iminyhadala yethu ibonisa imisebenzi yemfundo yokubandakanya abantu bethu abancinci kunye neziganeko ezizinzileyo ukugcina iinzame zethu zokugcina indawo eluhlaza iluhlaza, ”utshilo uNkosikazi Francis.
Uluntu luza kukwazi ukonwabela kude neminye imisebenzi kubandakanya ingxoxo yephaneli kunye ne-Contra d'Expression Orale ngabantwana besikolo njengoko iminyhadala iza kusasazwa ngqo okanye isasazwe. Ngotshintsho oluncinci kulo msitho, itheko lokutya liza kuphinda libonakaliswe kule nkqubo kwakhona kulo nyaka njengoko amaqabane ezokhenketho eza kusindleka iminyhadala kwindawo zawo.
UMnyhadala woKhenketho owenziwa minyaka le lulwandiso loSuku lwezoKhenketho lweHlabathi olubhiyozelwa nge-27 kaSeptemba kwaye luqaliswe nguMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO).